ထူးခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း၍ သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ မော်တော်ကား... | CarsDB
ထူးခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း၍ သမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့ မော်တော်ကားများ
အသစ်စက်စက် ၀ယ်ထားတဲ့သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားထဲကိုပထမဦးဆုံး အကြိမ် လီဗာပေါ်ကို ခြေထောက်တင် ခရီးနှင်ရတဲ့ ခံစားချက်ဟာ မေ့မရနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းအောင်ကြည့်ကောင်းကောင်း၊ ဈေးဘယ်လောက်ကြီးပါစေ ဒီလိုထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ထိပ်ဆုံးရောက်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်အလားခံစားစေရမှာအမှန်ပါ။
အဲ့ဒီလိုပဲ ယခင်ခေတ် သမိုင်းဝင်ကားအမျိုးအစားတွေထဲက တစ်စီးလောက်တော့ မောင်းခွင့်ရဖို့ မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ကူးမိထားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို အောက်ပါ ကားအမျိုးအစားတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်နေမလား?
ကဲ ကြည့်ကြရအောင်။ ဒီ Delorean D12 ဟာ မင်းသားDoc Brown အသုံးမပြုခင်ကတည်းက အတော်လေးကို မိုက်တဲ့ကားပါ။ ဒါပေမယ့် Doc က Plutonium တွေနဲ့ ပစ္စည်းအပိုအနည်းငယ် ဆင်ယင်လိုက်တဲ့အခါမှာ သမိုင်းဝင်သွားတဲ့ အကောင်းဆုံးကားတစ်စီး တစ်မျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Back to the Future ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးနေစဉ်မှာစုစုပေါင်းကား ၆ မျိုးလောက်အသုံးပြု ရိုက်ကူးခဲ့တာကို အားလုံး သိပြီးခဲ့ဖူးလောက်မယ် မထင်ဘူး။ အဲဒီက ကား ၅ စီးကတော့ဝယ်ယူစုဆောင်းသူတွေလက်ထဲမှာပါ။ Doc က Nuclear Fusion powered hover car အနေနဲ့ အဆင့်ထက်မြှင့် လိုက်တဲ့အခါမှာ စကားလုံးနဲ့ မဖော်ပြနိုင် လောက်အောင်က ထူးခြားသွားခဲ့တယ်။ ဒီကားကို ၀ယ်ယူဖို့တောင် ဘယ်ကားအရောင်းစင်တာမှာမှ ရှာလို့ တွေ့ နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်တိုင် 88mph အထိမောင်းနိုင်မယ့် တစ်နေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ပိုင်ခွင့်တော့ရှိပါသေးတယ်။
Lamborghini ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားအံ့သြဖွယ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့ကားပါ။သူ့ရဲ့ အင်ဂျင်စက်သံတောင်မှ စွဲမက်စရာကောင်လွန်းပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဘယ်သူမဆို မလွဲမသွေစိတ်ဝင်စားကြမှာ အသေအချာ ပဲပေါ့။ ဒီကားအမျိုးအစားက ဈေးနှုန်းအဆမတန်ကြီးမားပါလိမ့်မယ်၊ဒါပေမယ့် သင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကားဝယ်ပြီးရင် တစ်သက်လုံးနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ (ရန်ကုန်လိုရေကြီးတဲ့နေရာမှာ မစီးရင်ပေါ့)။
The German BMW Pool Car
မကြာသေးခင်က ထူးခြားဆန်းပြား ကားသတင်းတွေထဲမှာ တော်တော်ကို ထူးခြားတဲ့ ကားတစ်စီး ပါတယ်ဗျ။ အဲဒီကားမျိုး ဘယ်မှာမှရှာမတွေ့နိုင်လောက်တော့ဘူး။ဂျာမန်လူငယ်တစ်စု သူတို့ရဲ့ BMW ကားကို အတော်လေးငြီးငွေ့လာပုံရတယ်။ ဒါနဲ့ ထူးခြားအောင်ကားကိူ ရေကူးကန်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ သေချာတီထွင်ထားတဲ့အဲဒီကားကတော့ gear ၁ခုနဲ့ 15mph နှုန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလူငယ်တွေ ကားကို လမ်းအလယ်ပစ်ထားခဲ့ပြီး ထွက်ပြေးသွားတဲ့နောက် မြို့ခံရဲတွေ အနေနဲ့ ကားတစ်စီးထဲမှာ ရေလီတာ၂၀၀၀ တွေ့ခဲ့ရလို့ အတော်အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်။ အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ကို ရဲတွေကဖမ်းမိလိုက်တဲ့အတွက် သူတို့အားလုံး ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရတော့မှာပါ။
F1 ကားထဲတော့ဘယ်သူမှ ရေဂါလံထောင်သောင်းမက မထည့်ရက်လောက်ပါဘူး။ F1ဟာ အထင်ရှားအကျော်ကြားဆုံး ၊ လိုချင်တပ်မက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး Sport car တစ်မျိုးပါ။ စစမောင်ချင်း 3.2 စက္ကန့် မှာတင် 0-60 mph အထိသွားပြီး၊ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကတော့ 231mph ပါ။ ဒါတွေအားလုံးထက်ကို ကားအတွင်းခန်းရဲ့အလယ်မှာထိုင်ပြီးမောင်းရတဲ့ အနေအထားကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ F1 ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတီထွင်ထုတ်လှုပ်ထားသမျှ အမြန်ဆုံးကား ဖြစ်ပြီးပညာရှင်တွေ သုံးသပ်ချက်အရ အဲဒီ အမြန်ဆုံးကား နေရာကိုလည်းလက်လွှတ်လိုက်ရအုံးမှာမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့။ စုစုပေါင်း အစီး ၁၀၀ကျော်သာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ F1 ကို တစ်ကြိမ်လောက်တောင်းမောင်းခွင့်မရလိုက်မှာကို စဉ်းစားပြီး ၀မ်းမနည်းပါနဲ့၊ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်လည်း လက်လှမ်းမမှီတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။
ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ အပျံစားကားတွေကိုမောင်းခွင့်ရတဲ့သူတစ်ဦးကတော့ 007 ပါ။ James Bond အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ ကားအမျိုးအစားအများစုက Aston Martin ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။ The Spy who love me ဇာတ်ကားမှာသုံးတဲ့ Submarine Car ကို လေလံ ပွဲမှာရောင်းချသွားခဲ့ပြီး ဘီလီယျံနာ Elon Musk က ၀ယ်ယူလိုက်တယ်လို့ ၀န်ခံ ပြောကြားသွားပါတယ်။ Musk ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ် အတွင်းမှာ Submarine ကားအဖြစ် ချက်ချင်းပြောင်းမသွားလို့ နည်းနည်း စိတ်ပျက်မိပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပူစရာတော့မလိုပါဘူး၊ နောင်မှာ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း ဖြစ်အောင်လို့အကြီစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။
The flint stones car
ဒီကားကတော့အရင်တ်ေတုန်းက အမြန်နှုန်းရှSportcar အမျိုးအစားမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် စိတ်ချမ်းချမ်း သာသာစီးရမယ့် ကားတစ်စီးပါတဲ့။ Flint Stone ကား idea ကို သဘောကျမောင်းနှင်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်က ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီ မှာလည်းအလားတူတီထွင်ဖူးတယ်လို့ကြားဖူးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဂျာမန်တွေက ကားတွေကို ပုံမှန်ထက်ထူးထူးခြားခြားမောင်းချင်ကြတယ်လို့ ထင်မြင်မိတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် ဒီကား တီထွင်သူတစ်ယောက်တော့ သူ့ကားဘေးမှာ Mercedes Banz နဲ့ BMW ကားတွေဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ အချိန်မှာ အတော်ဗျာများ နေမယ့်ပုံကို မြင်ယောင်နေပြီးလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ကားကို တရားဝင်ကားအမျိုးအစားအဖြစ် စာရင်းသွားသွင်းတဲ့အခါမှာတော့ ကားတစ်စီမှာလိုအပ်တဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အတွက် ပိုင်ရှင်က မောင်းနှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကားအလှပြဖို့ရန်အတွက်သာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
Image courtesy Wikimedia Commons and Flickr
အသဈစကျစကျ ဝယျထားတဲ့သငျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျကားထဲကိုပထမဦးဆုံး အကွိမျ လီဗာပျေါကို ခွထေောကျတငျ ခရီးနှငျရတဲ့ ခံစားခကျြဟာ မမေ့ရနိုငျတဲ့အတှအေ့ကွုံပါ။ ဘယျလောကျပဲ စိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးအောငျကွညျ့ကောငျးကောငျး၊ စြေးဘယျလောကျကွီးပါစေ ဒီလိုထိတှလေို့ကျရတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ထငျရှားကြျောကွားတဲ့ ထိပျဆုံးရောကျနာမညျကွီးပုဂ်ိဂုလျအလားခံစားစရေမှာအမှနျပါ။
အဲ့ဒီလိုပဲ ယခငျခတျေ သမိုငျးဝငျကားအမြိုးအစားတှထေဲက တဈစီးလောကျတော့ မောငျးခှငျ့ရဖို့ မိတျဆှတေို့ စိတျကူးမိထားဖူးပါလိမျ့မယျ။ ဒါဆို အောကျပါ ကားအမြိုးအစားတှထေဲက တဈခုဖွဈနမေလား?
ကဲ ကွညျ့ကွရအောငျ။ ဒီ Delorean D12 ဟာ မငျးသားDoc Brown အသုံးမပွုခငျကတညျးက အတျောလေးကို မိုကျတဲ့ကားပါ။ ဒါပမေယျ့ Doc က Plutonium တှနေဲ့ ပစ်စညျးအပိုအနညျးငယျ ဆငျယငျလိုကျတဲ့အခါမှာ သမိုငျးဝငျသှားတဲ့ အကောငျးဆုံးကားတဈစီး တဈမြိုးဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ Back to the Future ရုပျရှငျကိုရိုကျကူးနစေဉျမှာစုစုပေါငျးကား ၆ မြိုးလောကျအသုံးပွု ရိုကျကူးခဲ့တာကို အားလုံး သိပွီးခဲ့ဖူးလောကျမယျ မထငျဘူး။ အဲဒီက ကား ၅ စီးကတော့ဝယျယူစုဆောငျးသူတှလေကျထဲမှာပါ။ Doc က Nuclear Fusion powered hover car အနနေဲ့ အဆငျ့ထကျမွှငျ့ လိုကျတဲ့အခါမှာ စကားလုံးနဲ့ မဖျောပွနိုငျ လောကျအောငျက ထူးခွားသှားခဲ့တယျ။ ဒီကားကို ဝယျယူဖို့တောငျ ဘယျကားအရောငျးစငျတာမှာမှ ရှာလို့ တှေ့ နိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ကိုယျတိုငျ 88mph အထိမောငျးနိုငျမယျ့ တဈနရေ့ောကျလာလိမျ့မယျလို့ စိတျကူးယဉျပိုငျခှငျ့တော့ရှိပါသေးတယျ။
Lamborghini ကတော့ စိတျလှုပျရှားအံ့သွဖှယျရာတှနေဲ့ပွညျ့နှံ့နတေဲ့ကားပါ။သူ့ရဲ့ အငျဂငျြစကျသံတောငျမှ စှဲမကျစရာကောငျလှနျးပါတယျ။ သခြောတာကတော့ ဘယျသူမဆို မလှဲမသှစေိတျဝငျစားကွမှာ အသအေခြာ ပဲပေါ့။ ဒီကားအမြိုးအစားက စြေးနှုနျးအဆမတနျကွီးမားပါလိမျ့မယျ၊ဒါပမေယျ့ သငျတတျနိုငျတယျဆိုရငျတော့ ဒီကားဝယျပွီးရငျ တဈသကျလုံးနောငျတရမှာမဟုတျဘူးဗြ (ရနျကုနျလိုရကွေီးတဲ့နရောမှာ မစီးရငျပေါ့)။
မကွာသေးခငျက ထူးခွားဆနျးပွား ကားသတငျးတှထေဲမှာ တျောတျောကို ထူးခွားတဲ့ ကားတဈစီး ပါတယျဗြ။ အဲဒီကားမြိုး ဘယျမှာမှရှာမတှနေို့ငျလောကျတော့ဘူး။ဂြာမနျလူငယျတဈစု သူတို့ရဲ့ BMW ကားကို အတျောလေးငွီးငှလေ့ာပုံရတယျ။ ဒါနဲ့ ထူးခွားအောငျကားကိူ ရကေူးကနျအဖွဈပွောငျးလဲလိုကျတယျ။ သခြောတီထှငျထားတဲ့အဲဒီကားကတော့ gear ၁ခုနဲ့ 15mph နှုနျးသှားနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလူငယျတှေ ကားကို လမျးအလယျပဈထားခဲ့ပွီး ထှကျပွေးသှားတဲ့နောကျ မွို့ခံရဲတှေ အနနေဲ့ ကားတဈစီးထဲမှာ ရလေီတာ၂ဝဝဝ တှခေဲ့ရလို့ အတျောအံ့အားသငျ့ခဲ့ရတယျ။ အဖှဲ့ထဲက တဈယောကျကို ရဲတှကေဖမျးမိလိုကျတဲ့အတှကျ သူတို့အားလုံး ဒဏျငှရေိုကျခံရတော့မှာပါ။
F1 ကားထဲတော့ဘယျသူမှ ရဂေါလံထောငျသောငျးမက မထညျ့ရကျလောကျပါဘူး။ F1ဟာ အထငျရှားအကြျောကွားဆုံး ၊ လိုခငျြတပျမကျဖှယျအကောငျးဆုံး Sport car တဈမြိုးပါ။ စစမောငျခငျြး 3.2 စက်ကနျ့ မှာတငျ 0-60 mph အထိသှားပွီး၊ အမွငျ့ဆုံးအမွနျနှုနျးကတော့ 231mph ပါ။ ဒါတှအေားလုံးထကျကို ကားအတှငျးခနျးရဲ့အလယျမှာထိုငျပွီးမောငျးရတဲ့ အနအေထားကလညျး စိတျလှုပျရှားစရာပါ။ F1 ဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာတီထှငျထုတျလှုပျထားသမြှ အမွနျဆုံးကား ဖွဈပွီးပညာရှငျတှေ သုံးသပျခကျြအရ အဲဒီ အမွနျဆုံးကား နရောကိုလညျးလကျလှတျလိုကျရအုံးမှာမဟုတျသေးပါဘူးတဲ့။ စုစုပေါငျး အစီး ၁ဝဝကြျောသာ ထုတျလုပျထားတဲ့ F1 ကို တဈကွိမျလောကျတောငျးမောငျးခှငျ့မရလိုကျမှာကို စဉျးစားပွီး ဝမျးမနညျးပါနဲ့၊ကြှနျတျောတို့တှအေတှကျလညျး လကျလှမျးမမှီတဲ့အခှငျ့အရေးတဈခုပါ။
ကောငျးပဆေို့တဲ့ အပြံစားကားတှကေိုမောငျးခှငျ့ရတဲ့သူတဈဦးကတော့ 007 ပါ။ James Bond အမြားဆုံးအသုံးပွုတဲ့ ကားအမြိုးအစားအမြားစုက Aston Martin ဖွဈပွီး နောကျထပျ သူကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ကားအမြိုးအစားတှကေိုဖျောပွသှားတဲ့သတငျးတှရှေိပါတယျ။ The Spy who love me ဇာတျကားမှာသုံးတဲ့ Submarine Car ကို လလေံ ပှဲမှာရောငျးခသြှားခဲ့ပွီး ဘီလီယြံနာ Elon Musk က ဝယျယူလိုကျတယျလို့ ဝနျခံ ပွောကွားသှားပါတယျ။ Musk ကတော့ ရုပျရှငျထဲကလို ခလုတျတဈခကျြနှိပျ အတှငျးမှာ Submarine ကားအဖွဈ ခကျြခငျြးပွောငျးမသှားလို့ နညျးနညျး စိတျပကျြမိပါတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ စိတျပူစရာတော့မလိုပါဘူး၊ နောငျမှာ ရုပျရှငျထဲကအတိုငျး ဖွဈအောငျလို့အကွီစားပွငျဆငျမှုတှလေုပျနပေါတယျလို့သိရပါတယျ။
ဒီကားကတော့အရငျတျေတုနျးက အမွနျနှုနျးရှSportcar အမြိုးအစားမြိုးတော့မဟုတျပမေယျ့ စိတျခမျြးခမျြး သာသာစီးရမယျ့ ကားတဈစီးပါတဲ့။ Flint Stone ကား idea ကို သဘောကမြောငျးနှငျခငျြတဲ့လူတဈယောကျက ကိုယျတိုငျဖှဲ့စညျး တညျဆောကျလိုကျပါတယျ။ဂြာမနီ မှာလညျးအလားတူတီထှငျဖူးတယျလို့ကွားဖူးလို့ ကြှနျတျော့အနနေဲ့ ဂြာမနျတှကေ ကားတှကေို ပုံမှနျထကျထူးထူးခွားခွားမောငျးခငျြကွတယျလို့ ထငျမွငျမိတယျ။
အခုလောကျဆိုရငျ ဒီကား တီထှငျသူတဈယောကျတော့ သူ့ကားဘေးမှာ Mercedes Banz နဲ့ BMW ကားတှဖွေတျမောငျးသှားတဲ့ အခြိနျမှာ အတျောဗြာမြား နမေယျ့ပုံကို မွငျယောငျနပွေီးလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ ဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ကားကို တရားဝငျကားအမြိုးအစားအဖွဈ စာရငျးသှားသှငျးတဲ့အခါမှာတော့ ကားတဈစီမှာလိုအပျတဲ့ လုံခွုံမှုနဲ့ မကိုကျညီတဲ့အတှကျ ပိုငျရှငျက မောငျးနှငျဖို့အတှကျမဟုတျဘဲ ကားအလှပွဖို့ရနျအတှကျသာ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။
Posted at: 16-06-2014 12:42 PM